i-CSA imemezele uhambo lwe- Bangladesh ne-Australia
Namhlanje i-Cricket South Africa (CSA) imemezele imidlalo yasekhaya yeqembu le-South Africa Women Emerging nama-Proteas Esifazane ngo-2019/2020, i-Bangladesh Emerging ne-Australia kudlalwa ekhaya ngo-July 2019 no-March 2020, ngokulandelana kwabo.
Iqembu le-SA Emerging lizodlala ne-Bangladesh kwimidlalo emithathu yama-One-Day nama-T20 amathathu e-Groenkloof Oval nase-Mandela Oval ePitoli nase-Hammanskraal phakathi kwa-23 July kuyela ku-04 August kulonyaka.
Eqenjini kubalwa abadlali abakhethwa kwi-Powerade Women’s Academy ngo-2019, bazobe belindele ukuthuthukisa imiphumela yabo ye-Emerging Tri-Series yangonyaka odlule bedlala ne-England Women’s Academy ne-Australia Shooting Stars.
Onyakeni ozayo, ama-Proteas Women azobhekana ne-Australia kuma-One-Day Internationals (ODI) amathathu ne-T20 International series enemidlalo emthathu kusukela ngo-19 March – 04 April 2020. Imidlalo izodlalelwa ezinkundleni ezintathu, e-Pietermaritzburg, e-East London nase-Benoni imidlalo embili inkundla iyinye.
Imidlalo yama-overs awu-50 izobaluleka kakhulu, ngoba kusakhona amaphuzu e-ICC Women’s Championship (IWC). Ama-T20s azolandela emuva kwe-2020 ICC Women’s T20 World Cup e-Australia (21 February – 08 March).
i-CSA High Performance Manager, u-Vincent Barnes uphawule wathi: “Siyakujabulela ukumemezela uhambo lwasekhaya olubili, ikhilikithi enezinga eliphezulu izobe idlalelwa ekhaya. Sibone imidlalo emihle kweqembu lesizwe futhi uhambo lwe-Australia lizoba elinye ithuba lokuthi badlale kahle kwisimo sase-South Africa bedlala neqembu eliphezulu.”
“Iningi ikhilikithi ezyo eqenjini labesifazane eminyakeni embili ezayo, i-T20 World Cup onyakeni ozayo ne-Women’s World Cup ngo-2021, ngakho kubalulekile ukuqiniseka ukuthuthuka okuqhamukayo kuyaqhubeka nokukhiqiza futhi yilapho la i-National Academy neqembu le-emerging kuzobaluleka.”
“Sinabadlali abafana no-Nondumiso Shangase, u-Faye Tunnicliffe no-Sinalo Jafta abaqhamuke kuloluhlelo, baze bakhethelwa isizwe, ngakho liyathembisa ikusasa,” u-Barnes evala.
i-CSA imemezela abangena kwi-2019 Powerade Women’s Academy